အဘယ်အရာကိုမြင် Vitoria Gasteiz, သမိုင်းဝင်နှင့်ဂေဟစနစ်မြို့ | ခရီးသွားသတင်း
အဘယ်အရာကို Vitoria Gasteiz အတွက်ကြည့်ရှုပါ
Vitoria Gasteiz ကိုဒီနွေရာသီမှာလာလည်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ဘာတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားမိရင်၊ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိသည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။ Victoriacum), အဖိုးတန် အလယ်ခေတ်မြို့ နှင့်အံ့မခန်း oenological နှင့် gastronomic အစဉ်အလာ။
သို့သော်အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်များစွာသောမြို့များရှိသောကြောင့်ကျန်းမာသောဘဝကို ဦး စားပေးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် သဘာဝပန်းခြံများ အတွင်းအပြင်ရောနှစ် ဦး စလုံး။ အချည်းနှီးသောကြောင့်ကြေငြာခဲ့သည် ဥရောပအစိမ်းရောင်မြို့တော် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူမနှင့်သင်ပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 အဘယ်အရာကို Vitoria Gasteiz အတွက်ကြည့်ရှုပါ
1.3 Vitoria Gasteiz တွင်တွေ့မြင်ရန်အခြားဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ
1.4 Vitoria Gasteiz တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့်နံရံနှင့်အလယ်ခေတ်လေးပုံတပုံ
1.6 Mural ခရီးစဉ်
2 Vitoria မှာဘာစားရမလဲ
မြို့တော် Basque နိုင်ငံ ၎င်းသည်တောင်များကဲ့သို့ဝိုင်းရံထားသောလွင်ပြင်၌မဟာဗျူဟာကျကျတည်ရှိသည် Urquilla, Urbasa y Gorbea။ မြို့ပြတိုးချဲ့မှုသည်သဟဇာတဖြစ်ပြီးစနစ်တကျရှိပြီးအနာဂတ်၏ Vitoria ၏အဆုတ်ဖြစ်ရန်ပြင်ပတွင်အစိမ်းရောင်လက်စွပ်တစ်ခုထားရှိသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲ၊ ငါတို့ဒီမြို့မှာမင်းမြင်နိုင်တာကိုရှင်းပြပါမယ်။
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် အဟောင်းစတုရန်း, မြို့ဟောင်းနှင့်ချဲ့ထွင်အကြားအခွင့်ထူးခံတည်နေရာပျော်မွေ့အဖြစ်မြို့၏ဘဝ၏အာရုံကြောစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုမှာအံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည် အထိမ်းအမှတ် လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းဗစ်တီးရီးယားစစ်ပွဲကိုအမှတ်ရကြသည်။
ဒါ့အပြင်၎င်း၏အဆုံးသတ်တစ် ဦး မှာ, တွန်းအားပေးသည် San Miguel ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, Plateresque ဒြပ်စင်များကဆက်ပြောသည်ထားတဲ့နှောင်းပိုင်း Gothic canon အောက်ပါ XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အပြင်ဘက်တွင်၊ အဝင်ဝဘေးတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည် အပျိုကညာဖြူ, Vitoria ၏နာယကသူတော်စင်။ နှင့်အညီ, အတွင်းပိုင်းကခမ်းနားမီးမောင်းထိုးပြ အဓိက altarpieceဂရက်ဂိုရီယိုဖာနန်ဒက်၏ Baroque အလုပ်။
၎င်း၏မျှော်စင်၏ထိပ်မှသည် Celedon မြို့တော်၏ပွဲတော်များဖွင့်လှစ်ရန်။ ဤအကျင့်စာရိတ္တသည်ပွဲများကိုပျော်မွေ့ရန် Vitoria သို့လာရောက်သည့်ရွာသားတစ် ဦး ကိုကိုယ်စားပြုပြီးပွဲတော်များသို့တက်ရောက်ရန် visitors ည့်သည်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုသင်္ကေတဖြစ်သည်။
Vitoria သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၂ ခုရှိသည်ဟုဝါကြွားနိုင်သည့်မြို့အနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Santa Maria ရဲ့တစ်ခု o Vieja သည် ၁၇ ရာစုမျှော်စင်နှင့်အတူ ၁၄ ရာစု Gothic အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အတွင်းပိုင်းက၏ပန်းချီကားများကိုစောင့်ရှောက် Rubens y ဗန်ဒစ်.
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ် Mary စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော၏, XNUMX ရာစုကနေ Neo- Gothic စတိုင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အတွင်း၌ဘဏ္modernာများကိုသိုလှောင်ထားသည် avalava ၏မြင့်မြတ်သောအနုပညာ၏ Diocesan ပြတိုက်.
Vitoria Gasteiz တွင်တွေ့မြင်ရန်အခြားဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအပြင် Gothic ဘုရားကျောင်းများသို့လည်းသင်လည်ပတ်နိုင်သည် စိန့်ပေတရုတမန်တော်, San Miguel Arcangel y စိန့်ဗင်းဆင့်အာဇာနည်အဖြစ် neoclassical အဖြစ် ကာမဲန်။ သို့သော်အားလုံးအထက်, San Prudencio က de Armentia ၏ Basilica, ၁၂ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော Basque Basque Romanesque ၏ရတနာ။ သငျသညျခမ်းနားဖလော်ရီဒါပန်းခြံကနေလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်အဲဒီမှာရနိုင်သည်။
San Prudencio က de Armentia ၏ Basilica
Vitoria Gasteiz တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့်နံရံနှင့်အလယ်ခေတ်လေးပုံတပုံ
သငျသညျလညျး Vitoria Gasteiz အတွက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် အလယ်ခေတ်မြို့ရိုး။ ၎င်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်အရေးပါမှုကြောင့်သာမကမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်း၏မြေအောက်ခန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေတူးဖော်မှုများအရမီတာနှစ်ရာကျော်နှင့်တာဝါတိုင်နှစ်ခုအပိုင်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 2001 ခုနှစ်တွင်, ဒီမြို့ရိုးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် Europa Nostra ဆုအမွေအနှစ်များအတွက်နိုဘယ်ဆုကိုစဉ်းစားသည်။
၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေ အလယ်ခေတ်မြို့ စပိန်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ Gothic ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်အချို့သောပြတိုက်များကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများအပြင်၎င်းသည်၎င်း၏လမ်းများကိုဖြန့်ဝေနေဆဲဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၏ Bibat သို့မဟုတ်၏ထူးခြားသော naipes.
Vitoria အများအပြားလည်းရှိပါတယ် ခေတ်ဆန်းနန်းတော်များ။ ဥပမာကောင်းများမှာ Escoriaza-Esquivel နန်းတော်၊ avalava-Esquivel နန်းတော်နှင့် Ruiz de Vergara နန်းတော်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Baroque စတိုင်၌တည်ရှိ၏ Alameda ၏ Marquis ၏ နှင့်ဆယ်ငါးရာစု၌တည်၏ Doña Ochanda မျှော်စင်များ y အဆိုပါ Hurtado က de Anda ၏.
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်, ဒါပေမယ့်လည်း XNUMX ရာစုကနေဖြစ်သော်လည်းရှိပါတယ် အဆိုပါPortalón၎င်းကိုစာတိုက်အိမ်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏အလယ်ခေတ်အသွင်အပြင်အားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခြားဆောက်လုပ်ရေး Cordon အိမ်များ, အဆိုပါ Maturana ၏ o အဆိုပါGonzálezChávarri၏ သူတို့က Vitoria အတွက်မြို့ပြဗိသုကာများ၏အမွေအနှစ်ကိုဖြည့်စွက်။
Vitoria ၏နောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာနံရံဆေးရေးဆွဲခြင်းခရီးစဉ်ဟုခေါ်သည့်မြို့ဟောင်းအဟောင်း၏မျက်နှာစာများပေါ်တွင်အနုပညာရှင်အမျိုးမျိုးမှပြုလုပ်သောပန်းချီကားများဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် Burulleríasစတုရန်း နှင့် အသားသတ်၏ Cantons, Santa Ana ၏ y by anorbin.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Vitoria မှာမြင်ရမယ့်အရာများစွာအပြင်သင်၌ပျော်မွေ့ရန်စိမ်းလန်းသောareasရိယာများစွာရှိသည်။ သူတို့တွင်ထင်ရှားစေသည် Florida ပန်းခြံငါတို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့် Romanticism ၏စတိုင်အတွက်စီးနှင့်သေးငယ်တဲ့သစ်တောများနှင့်အတူတန်ဆာဆင်ထားတဲ့စစ်မှန်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တော်ဖြစ်သော။
အထက်ပါ၏ဆက်လက်သည် Senda ပန်းခြံ, သစ်အယ်သီးပျိုးပင်များနှင့်ပြည့်နေသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် San Prudencio de Armentia ၏ Basilica ကို ဦး တည်သည်။ နှင့်သူတို့မှလာမယ့် ဆရာတော်Fernándezက de Piérola၏ဥယျာဉ်တော် ကြံ့ရုပ်နှင့်၎င်း၏ထူးခြားသောပန်းပုနှင့်အတူ San Martínပန်းခြံများ, မြောက်မှ y Arriaga ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အခြားသူများအကြား။ အဆိုပါမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ အစိမ်းရောင်လက်စွပ် မြို့တော်ပတ်လည်ရှိဥယျာဉ်areasရိယာ၏ကွန်ယက်၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Vitoria Gasteiz မှာဘာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုအပြင်အပြင်ဘာစားရမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့မပြောဘူးဆိုရင် Basque Basque နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကမပြည့်စုံဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Basque နိုင်ငံရဲ့ gastronomy ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ။
Vitoria အစားအစာနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်း၏ဥယျာဉ်ခြံများနှင့်တောင်တန်းများ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောထုတ်ကုန်များဖြင့်အာဟာရရရှိသည်။ သူတို့တွင် ကျယ်ပြန့်ပဲ နှင့် မှိုများ။ အဆုံးစွန်သောနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်လူသိများသူတွေကို ပန်ကရိယ, တစ်စုံတစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်ထားတဲ့ "တောင်၏ elvers ။ "
Vitoria ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများထဲတွင် ခရု alavesa, အားကြီးသောငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်; က ထမင်းအထူးသဖြင့်အနီရောင်ပဲများသို့မဟုတ် chorizo ​​နှင့်အာလူး၊ က braised ငုံး နှင့် အမဲသားကင်။ ငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေအများကြီးစားတယ် ချဉ် bream နှင့် ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်အတူရောက်ရေချိုငါး.
သင်၏အစားအစာပြီးဆုံးရန်အတွက်သင်မေးနိုင်သည် အဆိုပါ gochua, မုန့်, ​​ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်, ​​pastry မုန့်နှင့်အရည် caramel ရှိပါတယ်တဲ့အချိုပွဲ။ ဒါပေမယ့်လည်းသင်ရွေးလို့ရပါတယ် ကတ္တီပါအချို့ ကလေးငယ်များ ဒါမှမဟုတ်တချို့ မင်္ဂလာပါ။ ပြီးတော့အစားအစာကိုဆေးကြောရန်၊ La Rioja Alavesa မှဟင်းရည်အကောင်းဆုံး စပိန်မှဝိုင်များ.
သို့သော်၊ သင်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရာတစ်ခုကိုလိုချင်ပါကသင်၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည် pot-pintxo ထုံးစံ, Vitoria ၌တည်ရှိ၏။ ၎င်းတွင်ယူရိုတစ်ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝိုင်နှင့်ပုလင်းတစ်လုံးပါဝင်သည်။ မြို့တစ်မြို့လုံးတွင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောဘားလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဘစ်စကီနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးအမြစ်တွယ်နေသောဤအလေ့အထကိုသင်နှစ်သက်နိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Vitoriaအစွမ်းထက်သောအမွေအနှစ်များ၊ စိမ်းလန်းသောနေရာများ၊ အရသာပြည့်ဝသော gastronomy နှင့်မြို့ငယ်လေးတစ်ခု၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု။ Vitoria Gasteiz မှာဘာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းညွှန်လေးကသင့်ကိုအဖြေတချို့ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » အဘယ်အရာကို Vitoria Gasteiz အတွက်ကြည့်ရှုပါ